सामाजिक कार्य पनि चेतनाकै उपज हो झै लाग्छ -युवा समाजसेवी महर्जन – newslinesnepal
सामाजिक कार्य पनि चेतनाकै उपज हो झै लाग्छ -युवा समाजसेवी महर्जन
प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७७, शनिबार ०९:२९
खेलकुद, निर्माण–व्यापार र समाजसेवाको क्षेत्रमा सकृय युवा हुन् भुषण महर्जन । उनी योँकुशिन बुदो कराँते शाकाई इन्टरनेशनलका नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष छन् । त्यसो त उनी समग्र खेल क्षेत्रका एक इमान्दार सारथी पनि हुन् । आफुलाई खेलसेवी भन्न रूचाउने महर्जन युवा समाजसेवी समेत हुन् । क्रान्तिकारी र सामाजिक चेतनाका धनी महर्जनले दिन दुखी र अभावमा गुजारा टार्न वाध्य मानिसहरुको लागी आफु सक्य सहयोग पु¥याउँदै आएको पाईन्छ । उनी निर्माण व्यवसाय र व्यापारमा पनि संलग्न रहदै आएका छन् । महर्जन ए टु जेड कन्ट्रक्सन तथा टप हिमालयन ट्रेडर्सका संचालक हुन । व्यापार, समाजसेवा र खेल क्षेत्रका त्रिवेणी भुषण आफनो नाम जस्तै चम्किला युवा रत्न हुन । न्युज लाइन्स पाक्षिकले उनै भुषण महर्जनसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः–
म निर्माण व्यवसाय, ट्रेड व्यापार र सामाजिक गतिविधीमा सकृय छु । कोभिडबाट सिर्जित जुन बिषमता छ, यसले समग्र क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । त्यसैले अधिकांश समय घरमा नै बित्ने गरेको छ । व्यवसायको काम सकेसम्म घरबाट नै सम्पादन गर्ने गरेको छु । बाहिर निक्लने माहौल नै छैन । यद्यपी सामाजिक कार्यहरुका लागि घर बाहिर निक्लने गरेको छु । यस्तै नै छ ।
यहाँ त लामो समयसम्म विदेशी भुमीमा रहेर पनि स्वदेश नै फर्कनु भएको छ, यस पछाडीको कारण खुलाउन मिल्छ ?
हो म कामको सिलसिलामा जापान, जर्मन तथा अमेरिकामा लामो समय बसे । ती सबै देश एक से एक थिए । तर म त्यहाँ बस्दिन भनेरै गएको थिए । मलाई किन किन त्यहाँ बसिरहन मन लागेन पनि । मुख्यत नेपालको माया त्याग्न सकिन झै लाग्छ । आफ्नै माटोमा कर्म गर्ने लालसा सानै देखी थियो । विदेशबाट शिप र पुँजी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने ध्येयका साथ म परदेशिए अनि आफ्नो लक्ष्य पुरा भए पछि आफ्नै जन्मथलो फर्किए । अहिले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छु । कुनैबेला म ट्रेकिङ गाइड पनि थिए । विशेषत जापान तथा जर्मनीका पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने कार्यमा पनि मेरो जोड बल रहदै आए । हालसम्म २२ वटा मुलुक पुगेको हुनाले त्यहाँका साथीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको सुन्दरता, यहाँको कला संस्कृति आदि बारे बताउने र उनीहरुमा नेपाल जानु पर्छ भन्ने भावना जागृत गराउने गरेको छु ।साथै, खेल क्षेत्रका अलवा सामाजिक गतिविधीमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको छु ।
यहाँले शिप र पुँजीको जुन सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो त्यसलाई कुन क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ त ?
हाल मैले ए टु जेड कन्स्ट्रक्सन तथा टप हिमालयन ट्रेडर्स संचालन गरेको छु । विदेशबाट फर्कने बित्तिकै मैले दुवै व्यवसायमा हात हालेको हुँ । निर्माण सेवामा सानादेखि ठूला आयोजनासम्म गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौ । स्वदेशका अर्गानिक बस्तुहरुको विदेशमा मार्केटिङ गर्ने कार्य गरिरहेको छु । कारोबार ठिकै छ । मुख्यतः निर्यातमुखी व्यवसाय गर्दा सण्तुस्टी महशुश भएको छ भने युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउन पाउँदा उत्तिकै खुशी लागेको छ । सफलता असफलता भविष्य कै गर्भमा होला तर वर्तमानमा देशमै बसेर केही गरिरहदा आफ्नो माटो प्रति वफादार रहेको भान हुन्छ ।
यहाँ त क्योँकुशिन बुदो कराँते शाकाई इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ नि, यो कस्तो खेल हो प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
यो एक खाले कराँते खेल नै हो । यद्यपी यो चाहि आत्मरक्षाका लागि अति नै सहयोगी सिद्ध हुने गरेको छ । यस खेल रसियाबाट भित्रीएको हो । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन समेत यस खेलबाट दिक्षित हुनुहुन्छ । यसलाई यदाकदा ज्यानमारा खेल समेत भन्ने गरिएको पाईन्छ । खेल्दा खेल्दै ज्यानै समेत जान सक्ने भएकोले यसलाई कतिपय देशले भने मान्यता दिएका छैनन । जे होस्, महिला, बालबालिका लगायत सबैले नै आत्मरक्षाका लागि जीवनमा यो खेल सिक्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । यो र यस्तै साकारात्मकताका कारण राष्ट्रव्यापी रुपमा यस खेलको महत्व जगाउने कार्यमा म लगायत साथीहरु सकृय छौ ।
यहाँ त समाज सेवामा पनि सकृय हुनुहुन्छ नि होईन ?
मलाई समाजसेवीको ट्याग संचारकर्मी मित्रहरुले नै लगाईदिनु भएको हो । म समाजसेवी हुँ वा सामाजिक कार्यकर्ता मात्र हुँ भन्ने सवाल त्यती महत्वपूर्ण होईन । सवाल समानता र मानवताको हो । मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नु हुन्छ भने मानविय धर्म नै श्रेष्ठ हो भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसैले म समाजमा अभावमा गुजारा टार्न वाध्य मानिसहरुको न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर सामाजिक गतिविधीहरुमा संलग्न रहदै आएको छु । आफ्नो गक्ष अनुसार सहयोग गर्दै आएको छु ।
यहाँले आफ्नो गक्ष अनुसार समुदायमा के कति सहयोग गर्नु भयो केही उल्लेख गर्न मिल्छ ?
मैले सन् २००९ देखि पर्वतको पञ्चरत्न आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अक्षयकोष नै स्थापना गरेर बर्षेनी सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छु । यस बाहेक भुकम्प र नाकाबन्दी, बाढि पहिरो, हालको महामारीका बेलामा आफु सक्दो रासन, लत्ता कपडा, औषधी एवम् स्वास्थ्य सामाग्री लगायतका सहयोग हस्तान्तरण गर्दै आएको छु । सामान्य अवस्था समेत सामाजिक सहयोग गर्ने गर्दै आएको छु । सेवा भनेको प्रायः समाज सेवा भनेको आकस्मिक कार्य हो झै लाग्छ । कोही समस्यामा छ, उ बेसहारा बनेको छ भन्ने कानमा परेपछि सहयोग नगरी मनले मान्दैन । समस्याको किटान भए पछि सहयोगको लागि हात अघि बढी हाल्छ ।
समाजसेवामा लाग्नुको कारण चाहि केही छ कि ?
म राजनितीमा पनि सकृय भएर लागेको मानिस हुँ । मेरो विचारमा राजनिती पनि सामाजिक कार्य हो झै लाग्छ । तर दुःख लाग्छ कतिपयले राजनितीलाई कमाण्डलु बनाएर भझाएर खाएका पनि छन् । त्यस्ता घटना र पात्र देख्दा लाज र सरम पनि लाग्छ । मेरो चाह चाहि समाजलाई साच्चिकै गतिशिल बनाउनुपर्छ र समानताका लागि दिन दुःखी एवम् अभावमा रहेकाहरुलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने रहयो । खासमा सामाजिक कार्य पनि चेतनाकै उपज हो झै लाग्छ ।
खेलकुद तथा स्वास्थ्य सामाग्री तिहारको पूर्वसन्ध्यामा प्रदान गरिने
समाजसेवी गुरूङद्वारा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण
हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ–लम्साल